Iiprojekthi zobunjineli ezine-AutoCAD Civil 3D -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/IiProjekthi zobunjineli nge-AutoCAD Civil 3D
AutoCAD-AutoDeskUkufundisa i-CAD / GISZobunjineliTopography
Ngenye yezona zixhobo ezipheleleyo ngakumbi eSpeyin endizibonayo malunga ne-Civil 3D, ndiyiqaphele le ngqungquthela yeCartesia kwaye kubonakala ngathi ukuba ngaphezu Izibonelelo zeAUGI Kuphantse ukuba ufunde i-Civil 3D.
Kukhuthazwe nguApliCAD ngubani Kubonakala ukuba babambisana ekuguquleleni Bawakhile amaxwebhu ngokupheleleyo ngegalelo likaNeus Ros (uGeodesy Injineli kwiPolytechnic University yaseValencia). Ukuyifumana, kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi ye ApliCAD, kwaye ngokukhawuleza umsebenzisi kunye nephasiwedi efunyenwe apho ungayinakukhuphela kuphela lo mbhalo kodwa amanye anikwe yile nkampani.
Isiqulatho somxholo yilo:
1.- Isingeniso kwi-Autocad Civil 3D
Ekuqaleni iincwadi zijolise ekuchazeni ngokubanzi ngendlela efutshane, ayikho into ekubhaliweyo kuyo oko kuza kuzaliswa uxwebhu olupheleleyo kuba lubonakala lucebile kakhulu kwiimvavanyo kunye nemizekelo echazwe kwiSpeyin.
2.- Ngenisa kunye nokulawulwa kweefayili zeposti
Esi sahluko siquka ukufakwa kwamaphuzu, inkcazo yamacandelo amaphuzu, ukuhlela kunye nokulawulwa kwetafile zamanqaku.
3.- I-Module ye-parcelario.
Kule candelo uza kufumana ulawulo lweepakethi ezivela kwi-AutocAD, kunye nokwakhiwa kweengxelo njenge bhokisi kunye neebhokisi zeendawo.
I-4.- Ukuveliswa kwe-MDT: Uhlalutyo lweendawo eziphakamileyo, iintlambo kunye namanzi aphantsi.
Ukudala imodeli yendawo yedijithali, i-MDT, i-GRID, i-TIN, Imigca yokujikeleza, ukulahla imigca, ukulawulwa kwendawo, imephu yamathambeka kunye ne-raster draping ezingelwa kwi-model.
5.- Iiplani zoyilo
Kule sahluko kwiprofayili kunye nokuhlengahlengiswa kweenkcazo zenziwa.
6.- Uyilo lolungelelaniso
Uyilo lwejometri yeendlela, ukulungelelaniswa, iindlovu ezinqamlekileyo
7.- Ukuveliswa kweengxelo ezide
Iiprojethi zezityalo, iirve eziqhelekileyo ezindleleni, amacandelo aqhelekileyo,
8.- Ukuveliswa kweeprofayili ezijikelezayo
Amacandelo atshintshanayo, imigca yesampampu yesampula
9.- Imisebenzi yomgca. Udidi lwamacandelo kunye neentambo.
Amacandelo amacandelo endlela, amacandelo omsebenzi ofanayo, ama-slope, ukubonakala kwendlela kunye neendlela zendlela
10.- Ukuhamba komhlaba.
Ukubalwa kwemilinganiselo, ububanzi bendawo yokuhamba, izicucu kunye nokuzaliswa, imiqulu ehlanganisiweyo
11.- Ukufumana iingxelo zevolumu
Izinto eziphathekayo isekelwe kwincwadi yesiNgesi ye-Civil 3DIneminye imithambo efana naleyo i-Civil 3D incwadana yesiNgesi izisa, kodwa yakhiwe ngokupheleleyo yi-ApliCAD nge-didactics enobubele, ukuhamba komsebenzi kwezinye izahluko kulungile kakhulu ukuchaza yonke inkqubo ebandakanya iinkqubo nde. Ukongeza iifayile ezisetyenziselwa ukwenza umthambo, zilungile.
Sawubona kwaye siyabonga ngolwazi lwalo bhulogi. ingxaki endinayo yeyokuba ngokwenza inyoba kunye bonisa umnqamlezo amacandelo musa kuvela cornering epheleleyo umzekelo ukuba icandelo lomnqamlezo obuqhubekayo apho egopheni enqamlezileyo output njengoko duplicate okanye ingaba kukho amacandelo amabini kweli candelo, oku kwenzeka kwindawo yokuqala candelo apho kwigophe iqala ngoko ke olandelayo lidlule ngqo kwicandelo ongamphambi kokugqibela koKuhlala le curve, oku kwakhona kabili zigqithiselwe ngqo kwicandelo le-racta epasejini. umzekelo ukuba swiyenge iinkqubo ikhondo elilandelayo qho 20 eemitha ngqo kunye amagophe zonke 10 leemitha kwaye ukuba kwigophe iqala okuqhubekayo 1 + 820 Eli candelo elivelayo kodwa iphinda zilandelayo kuba 1 + 830, oku singaveli, nokuba kuphela icandelo lokugqibela kwigophe kubonakala umzekelo 1 + 930 kodwa kuphindwa kodwa hayi icandelo lokugqibela ophezu kwigophe ibonakala kwaye udlule ngqo kwicandelo emgceni, nceda nayiphi na ingcebiso kuba lo lemposiso enye nezinye ye-3d yomntu endiyifumeneyo xa ndizama ukufunda le program.
Sawubona kwakhona, apho ndifumana khona incwadi ye-Autocad Civil 3D ngesiNgesi.
ok ndiza kubona ukuba ndiyifumene, mbulela
Hayi ngokukhawuleza umhlobo wam, ndikucebisa ukuba ubuze kwiiforamu ezifana neCartesia kunye noGabriel Ortiz okanye kwi-AutoCAD Map manual, kuba andicingi ukuba akunakwenzeka. Ngelishwa andikwazi kukuphendula ngenyani kuba andinayo inkqubo.
Ukuhla ke ngoko awukwazi ukulayisha ifayile yefowuni ngqo kwiGoogle.
Kufanele, ngelishwa andinalo olo khetho. Ndibona i-Civil3D 3008, kwiMaphu / izixhobo / ukuthumela ngaphandle kodwa ayinayo inketho yokuthumela kwi-kml, mhlawumbi kukho iplagin.
Umbuzo we-Autocad Imephu unokukhetha? okanye i-Bentley Map kuphela.
Umele ulithumele kwi-kml ukuze ukwazi ukuwajonga ngeGoogle Earth
Sawubona! Ndingayithumela njani iifayile ze-cad kwi xml ifomathi ukuyijonga kwi-Google njengoko ndenza kwi-Microstation.
Ndisebenzisa i-AutoCad Imephu ye-2008 kwaye xa ukuthumela ngaphandle kwanditshela ukuba ithola izinto ze-95 kodwa ayilondolozi nto. Yintoni eyenzekayo ndiyenzileyo.
Ukumhlonela kwam, mhlobo, ndingazange ndizingene kuloo miqulu.
Ewe ndabenza ngokuhlela ifayela lmbrt.g66, kunye nale parameters
# Icandelo 1: Id / Ukuqinisekiswa / iDedved Data
# gcE_RAD (i-semi-axis Major) i-Clarke 1866
# gcP_RAD (i-axis encinane) I-Clarke 1866
gcSHIFTINDLELA: 4 NAD27
gcDAT_NM: I-North American Datum ye-1927 (US48, AK, HI neCanada)
gcSOURCE: izicwangciso zemiyalezo
## Icandelo 2: Ayiphumi, Lungelelanisa iNkqubo yeData eKhethekileyo
Ndiza kuzama ulwazi olithumile ngalo malunga nenkxaso yeBentley kwaye ndiya kukuxelela ukuba ndiyakwenza.
Ndiyavuya, nandixelela ukuba wenze njani.
Siyabonga g! Ndiyayibona ieeeeeeeeee.
Ndithumele kwi-imeyile yakho
ungangikhokela ukuba yeyiphi ipharamitha endiza kuyiguqula kuba i-100 kumitha ukuya ngasenyakatho ukuba ndimele ndihambise amamephu. Kuya kuba kuhle ukuzama ulwazi oluxhaswe ngabantu.
Ewe, kwesi sigaba bekulula Geographics. Impendulo yenkxaso yeza kum, kodwa ngokunyanisekileyo luhlobo olunzima.
I phantse esikuphumezileyo ukuqhwalela oziimitha 100, qhubeka uzama kodwa wenzayo Geographic, yaye andizange ndifumane data imephu Bentley.
Ewe, ubuyela kumxholo ukuze wenze ngokwezifiso ukucwangciswa:
Bendibona ukuba kwiGeographics oku bekulula, uye nje kwiZixhobo/ulungelelwaniso lwenkqubo/ kwaye apho ukhethe uMfundisi, emva koko uConic kunye nelambert conformal conic. Kwaye ukusuka apho unokuguqula idatha njengoko uyibeka kwiposi. Kwimeko yolungiselelo, wenze ikopi yefayile ye.g66 waze wakhetha “master / read ASCII g66”, wayilungisa kwaye kuphelele apho.
Andiyiboni injalo kwiMaphu yeBentley, ndiye ndabonisana nenkxaso, kodwa olona khetho lufanayo ndilubona luku: Izixhobo / ijografi / khetha inkqubo yolungelelwaniso, emva koko ukhethe "ukusuka kwilayibrari" kwaye emva koko ujonge "eqikelelweyo." " kwithala leencwadi, eNorth America, eNorth America equidistant conic. Into endingayiboniyo apha yindlela yokuyihlela.
Ndicinga ukuba kuya kufuneka uhlele ifayile ngeenyawo: uya kule dilesi:
C: Inkqubo yeeFayileBentleyGeospatialExtensioncoordinateparam
kwaye apha ujonge uqikelelo olufanelekileyo, kwaye wenze ikopi yalo. Jonga, ndicinga ukuba inokuba:
uyivula nge-notepad, kwaye apho uza kubona izinto ezinjenge:
gcPRJ_NM: Ukulungiswa kweConbert Conformal Conic Projection
gcDAT_NM: I-World Geodetic System ye-1984
gcELL_NM: I-World Geodetic System ye-1984
gcSOURCE: I-GeoCoordinator Dialog
kuya kufuneka ulungelelanise idatha, ukuba uyathandabuza malunga nokuba bathetha ukuthini, yiya kwi-Bentley Map uncedo, kwaye ujonge iinkcazo nganye nganye kwi "ASCII System Keywords", owenza ngayo uphando ngokubeka enye ye amagama, iya kuvela.
Emva kokuba wenze uhlengahlengiso, ulayishe nge:
Izixhobo / iinkqubo zoqhagamshelwano / funda i-ASCII .g66
Zama kwaye ndizise ukuba unemiqobo.
Ndiphe ithuba lokubuyela kwimpucuko, ndikho ngotyelelo.
Ndiyathumela kakade iifayile, ndiyathemba ukuba undixelele indlela yokudala ukuhlola nokuthumela ngaphandle kwi-KLM.
kakhulu mncinci JOSE
Ndithumelele ifayile ukuze ndihlale ngamehlo
Ndiyakuthumela idatha kunye naluphi na inkqubo enokubaluleka. apho i-imeyile ongayithumela idatha okanye ndikunike apha kwiforum. mbulelo kakhulu
Ndiyabulela ndicinga ukuba ndinolwazi olukhankanyileyo, ndiza kufuna uncedo lwakho ukudala uluvo olukhankanywe ngalo, yilapho ndilahleka khona.
Uya kulufumana ukufumana idatha kwi-datum echitshiweyo yendawo, ekho kwiimeko ezinjalo, ndicinga ukuba, zatshintshile ububuxoki basempumalanga kunye nobukhulu bentsika.
Emva koko uza kufuneka wenze ukulungiswa kunye nohlengahlengiso, kwaye unikezele ukubonakaliswa kwezi zinto uze uthumele ngaphandle kwi-kml.
Ndiyabonga, kwelinye iforum niyeke le nkxalabo; Hi g!, Wena uthene ndincede kumazwe angaphandle iifayile zam ukuba KML, zama ukwenza oko ngokutshintsha nokulungelelanisa inkqubo kunye Bentley Imephu kodwa kwilizwe lam El Salvador ukho ikota yesangqa 16 kodwa zincinane kangakanani na, ukusebenza kunye ukwahlulwa nxazonke zabo, njengoko unako ukuyenza le meko kuba, ndiwile nje xa ekuthumeleni iifayile kwi Pacific njengoko nekhilomitha enesiqingatha ukuya ezantsi. Ndiyabonga
Vicente, yiyiphi idilesi yewebhu?
I-autocad yobutyebi bombutho 3d 2009, intle kakhulu, kuya kukhangela ukufumana i-2010.
Ikhonkco yokukhuphela ayisebenzi !!!!! Ungayilungisa ??? _ Siyabonga
Renzo Ruiz uthi:
Izinto ezibonakalayo zinceda kakhulu kulabo basebenzisana neprogram kakuhle ngokulungelelaniswa ngokuzivocavoca. NOKUBA UTHANDA KUNYE. Ndiyakuvuyela u-ApliCAD. kunye ne-Geofumed ngokunikezela ngolwazi olunjalo.
Ndiyabulela, ndibulela kakhulu kumanqaku, ngoko unokucinga ukuba ixesha eliza kusisindisa ekufundeni le nkqubo.
guillermo rosales uthi:
Andikwazi ukuba ndibulela njani uncedo abanikela ngayo ngeminikelo!
UPablo E. Hass G. uthi:
Ndiyabonga kakhulu, ulwazi luxabisekileyo. Ndiya kukuxabisa ukupapasha amanqaku athile anxulumene nalo.
Atte. UPawulos Hass
Enkosi ngengcaciso, Vicente, bendithelekisa, kwaye kukho ukufana okuthile kuqheliselo oluza nesifundo seCivil3D, kodwa eneneni, ngumsebenzi omhle owenzileyo. Sele ndizenzile iingcaciso kwisithuba.
Ukubulisa kunye novuyo
Vicente Alarcon uthi:
Igama lam nguVicente Alarcon kwaye ndiyiDtor. yeSebe le-GIS kunye nobunjineli boLuntu be-APLICAD. Siyavuya kukuba la maxwebhu esiye sawaphuhlisa aya kuba luncedo kuwe. Ndifuna nje ukubeka ingqalelo kwintetho oyenzayo yale ncwadi. Le ncwadana ayilungelelanisi isiNgesi, ngokuchasene nayo ibhaliwe ngokupheleleyo ngabanye beenjineli zeso sicelo: uNeus Ros (unjiniyela we Geodesy wase-Polytechnic University of Valencia).
Ngendlela, ukuba unomdla kwiihloko ze-GIS, ndiyakumema ukukhuphela umqulu weProjekthi ye-GIS nge-Autocad MAP esuka kuRafael Serrano kunye noVicente Alarcon kwiwebhusayithi yethu.
Unokuyikhuphela kwiphepha le-ApliCAD, kufuneka ubhalise
Sawu, ndingayifumana phi le ncwadana? mbulela